« CENTRE D’INCUBATION TOSIK’ART » : Tosika ho an’ny tanora manana tetikasa eo amin’ny sehatry ny Kolontsaina – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 8:26
Nitondra fanazavana tamin'ireo tanora ny Minisitra.
Accueil/Kolontsaina/« CENTRE D’INCUBATION TOSIK’ART » : Tosika ho an’ny tanora manana tetikasa eo amin’ny sehatry ny Kolontsaina
« CENTRE D’INCUBATION TOSIK’ART » : Tosika ho an’ny tanora manana tetikasa eo amin’ny sehatry ny Kolontsaina
Tontosa omaly tetsy amin’ny IVOKOLO Analakely ny fampahafantarana ny Ivon-toeram-pikotrehana orinasa Tosik’art na ny Centre d’incubation Tosik’art. Tonga nanome voninahitra izany hetsika izany ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo, notronin’ireo mpiara-miasa aminy, ary ireo tanora nahazo ny tohana avy amin’ny Minisitera nandritra ny Tosik’Art andiany voalohany.
Lucien R. 8 septembre 2021
Maro amin’ny tanora malagasy no manana vina tsara amin’ny resaka tetikasa, indrindra ireo tetikasa mifandraika amin’ny tontolon’ny Kolontsaina. Olana ho an’izy ireo kosa anefa ny tsy fananana sehatra hahafahana mitondra izany tetikasa izany mba hakana torohevitra. Ny taona 2019, araka izany, no nanomboka nanampy tosika ireo tanora malagasy manana tetikasa mifototra amin’ny fampivoarana ny kolontsaina ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina. Maro amin’ ireo tanora anefa no tsy manana fahafahana hiditra lalina amin’izay sehatry ny fandraharana izay ka izany no antony nananganan’ny Minisitera ny ivon-toeram-pikotrehina orinasa, mba ahafahana mitaridalana ireo tanora, manome toro-hevitra ho azy ireo, ary indrindra manome fanofanana amin’ny sehatra tian’izy ireo hilofosana. Araka ny fanazavana dia efa misy ny solosaina azo ampiasaina ao amin’ity toerana ity hanaovana fikarohana isan-karazany. Efa misy boky ihany koa hahafahana manovo fahalalana mahakasika ny fananganana tetikasa.
Tsy manohana ara-bola ny Minisitera
Marihina fa ity Ivon-toeram-pikotrehina orinasa Tosik’art ity no faharoa napetraky Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, ankoatra ny any Toamasina. Nambaran-dRamatoa Minisitra fa hatsangana manerana ny nosy izay Centre d’incubation Tosik’art izay ary efa neken’ny filan-kevitry ny Minisitra rahateo ny fametrahana ireo fito hafa any amin’ny faritra. Eo amin’ny fomba fidirana ao amin’ny Tosik’Art kosa indray, dia tsy maintsy miditra mpikambana ao anatin’ny Club FANORO. « Mila tanora mandray andraikitra, mandray anjara amin’ireo asa fanasoavana ny firenena toy ny tagnamaro sy ny sisa, izay no hany tambiny takina amin’ireo tanora maniry ny hisitraka ny tohana », hoy ny fanazavana. Tsara tsindrina fa tsy misy mihitsy tohana ara-bola ataon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ao anatin’ity tetikasa ity. Azon’ny minisitera atao kosa anefa no mandresy lahatra ireo Banky mpampindram-bola amin’izay tetikasa hita fa azo tohanana.
Nifanindran-dalana tamin’ity hetsika ity ihany koa ny fizarana traik’efa sy fahaiza-manao nataon’i Brice B Audio, izay isan’ny nahazo tohana tamin’ny fifaninanana Tosik’art andiany voalohany sy ny mpandresy laharana faharoa tamin’izany niaraka tamin’ireo tanora nanatrika ny hetsika.
MORAMANGA : Tokantrano 8731 hisitraka « Vatsy Tsinjo »
ANTENIMIERAMPIRENENA: Tsy marina ny resaka fanonganana an’i Christine Razanamahasoa
SAROBARATRA ITASY : Dahalo ampolony nanafika, mpanara-dia iray lavo
TAHIRIM-BOLA IRAISAMPIRENENA : Neken’ny filankevi-pitantanana ny fahazoantsika 312,4 tapitrisa dolara